ရေပန်းအစားဆုံး Lucky777 Slot - Myanmar Online Game
ဒီနေ့မှာတော့ အရိုးရှင်းဆုံး Pay Line နဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး Classic Slot ကစားနည်းဖြစ်တဲ့ Lucky 777 Slot နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Wheel3ခု Symbol9ကွက်ထဲနဲ့တင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းကစားရတဲ့ Slot ကစားနည်းတွေရဲ့ ဖခင်ကြီး 777 ရဲ့ပုံစံကိုယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Lucky7, Cherry, Bell, Bar အစရှိတဲ့ Symbol တွေနဲ့ အရမ်းကို Classic ဆန်တဲ့ အရသာကိုခံစားရစေမှာအမှန်ပါ။
ဒီကစားနည်းမှာတော့ Line9ခုပဲရှိပြီးတော့ Free Game ကတော့ 25 line အထိရှိပါတယ်။ “စိန်တွေကမြဲတယ်ဆိုပေမယ့် စိန်၃လုံးက 10000x (10 million) ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်!” ဒီ Slot မှာစိန်3လုံးသာပါခဲ့မယ်ဆိုရင် Free Game Session ကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Multiple တိုင်းလဲ တစ်လှည့်ပြီးတိုင်းမှာ 2x, 4x, 8x,.. Etc အဲ့လိုမျိုးတိုးသွားမှာဖြစ်ပြီး အများဆုံး 64x အထိရနိုင်ပါတယ်! ဒီကစားနည်းကနေ စုစုပေါင်း 1000x ရလာစေနိုင်တာမို့အခုပဲ ကစားနည်းကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်!
ဒီကစားနည်းမှာ ဘယ်ဘက်ကနေ ညာဘက်ရေတွက်လို့ စိန်(bonus) ကလွဲပြီး အနိုင်အားလုံးကို x1 Multiplyer နဲ့ပေးပါတယ်။ Wild Symbol ကတော့ စိန်(bonus) ကလွဲပြီး Symbol အားလုံးကိုလိုအပ်သလို အစားထိုးပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ Wild Symbol သာ Wheel3ခုလုံးမှာကျခဲ့မယ်ဆိုရင် 100 ပြန်ပေးပါသေးတယ်။ စိန် (bonus) ကတော့ Line3ခုလုံးမှာပေါ်နိုိင်ပြီးတော့ Free Spin Bonus ကိုရစေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမှာမေးစရာတစ်ခုရှိတာက Free Spin ကိုအလှည့်တိုင်း ဆတိုးတွေနဲ့ပေးပေမယ့်လဲ Wheel3ခု Line9ခုထဲနဲ့လှည့်ပေးနေတော့ နည်းနည်းလေးပဲရမှာပေါ့? လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ စိန်(bonus) ၃ခုကျလို့ Free Spin Bonus သာရသွားပြီဆိုရင် Wheel3ခုကနေ Wheel5ခုဖြစ်သွားပြီး Line 25 ခုနဲ့လည်ပတ်မှာဆိုတော့ ဆတိုးနဲ့ထပ်ပေါင်းလိုက်ရင် အများကြီးပြန်ရနိုင်ပါတယ်!
ပထမဆုံးအကြိမ် စိန်(bonus) ၃ခုကျခဲ့ရင် Free Spin ၅ခေါက်ရပါတယ်။ အဲ့မှာမှထပ်ပြီး Free Spin လှည့်နေတဲ့အချိန်မှာ Wheel 3,4 နဲ့5မှာသာထပ်ပြီးကျခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် Free Spin ထပ်ပေါင်းပြီး အများဆုံး 25 spin အထိရနိုင်တာနော်! Free Spin လှည့်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် လောင်းကြေးက Free Spin မရခင်ကထည့်ထားတဲ့ လောင်းကြေးအတိုင်းပဲလည်ပတ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ Free Game ကရော ဘယ်လိုပြန်ပေးလဲလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်
ရိုးရိုးနဲ့အတူတူပဲ ဘယ်ဘက်ကနေညာဘက် စိန်(bonus) ကိုထည့်မတွက်ပဲ အနိုင်အားလုံးကို Multiplier x1 ပေးပါတယ်။ Wheel ၅ခုဖြစ်သွားတဲ့အတွက် Wild Symbol3အခုအတွက်ကိုတော့ အတူတူပဲ 100, 4ခုအတွက်ကို 200 နဲ့5ခုလုံးမှာကျခဲ့ရင်တော့ 1000 အထိရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Free Spin Bonus Symbol ဖြစ်တဲ့ စိန်(bonus) ကတော့ Wheel5ခုလုံးမှာမပေါ်တော့ပဲနဲ့ ညာဘက် 3,4 နဲ့5တွေမှာသာပေါ်ပြီး ခုနကပြောခဲ့အတိုင်းပဲ ၃ခုကျခဲ့ရင် Free Spin5ခုထပ်ပေါင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တခြား Symbol တွေကဘယ်လိုပေးလဲ ပုံမှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ Wheel5ခုဖြစ်တဲ့အတွက် Symbol တစ်ခုခြင်းစီတိုင်းရဲ့ ပြန်ရနှုန်းတွေကလဲ တိုးပြီပေါ့!
ဒီတော့ ရိုးရိုး Pay Line9ခုနဲ့ Free Spin Pay Line 25 ခုရှိတာကိုတော့သိပြီးပြီဆိုတော့ ဒီ Pay Line တွေရဲ့နေရာတွေကို ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။
Pay Line တွေအကုန်လုံးကိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ လောင်းကြေးပမာဏနဲ့ မြှောက်ပြီးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Pay Line ပေါ်က Symbol အကုန်လုံးကို ဘယ်ဘက်ဆုံး Symbol ကနေစပြီးရေတွက်ပါတယ်။
ဒီကစားနည်းက အရင်ခေတ်ထဲက Slot ချစ်သူတွေစွဲစွဲမြဲမြဲကစားခဲ့ကြတဲ့ ကစားနည်းဖြစ်သလို အခုကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာဆော့နေရတဲ့ Slot တွေရဲ့ဖခင်ကြီးဆိုလဲ မမှားပါဘူး။ အဲ့တော့ Pay Line9line လိုလိုနဲ့ 25 အသွင်ဆောင်နေတဲ့ Classic Slot ကိုဆော့ပြီး Slot Professional တွေနဲ့ရင်ဘောင်တန်းဖို့ Ready ဖြစ်ပြီလား?